Undala Kangakanani Unayo Ukuba Uhambe NgePaintballing?
Ubudala bakho bePaintball buxhomekeke kwi-Where You Live
Iminyaka emininzi umntu kufuneka adlale ngayo ibhola yepalati iyahluka kakhulu apho ihlala khona. Amanye amazwe adinga ukuba abadlali babe ngabantu abadala, ngokuqhelekileyo banokuba ubuncinane ubuneminyaka engama-18 ubudala. Amanye amazwe angenayo imigaqo nayiphi na xa ifika kwimida yobudala bepalball. Kwabaninzi abantu, iminyaka yobudala iya kuba yinkampani yenkampani yomshuwalense ivumela abadlali ukuba baye kwintsimi yasemaphandleni , leyo ininzi ye-United States ineminyaka eyi-10 okanye eyi-12 ubudala.
Funda iimfuneko zokudlala
Ukuba ufuna ukwazi ixesha elifunekayo, cela nje intsimi yakho kwaye baya kuvuyela ukuchaza imithetho yabo. Umda wobudala uhlukahluka kwilizwe kunye nekarhulumente ngurhulumente, ngoko ke ukufikelela kwiziko lokupenda kwendawo yokupenda kunye nokuthetha nomnini yindlela efanelekileyo yokusebenza. Ngaphandle kwexesha elisemthethweni lokudlala, kukho umbandela wezinga elifanelekileyo lokukhula.
Nangona kuxhomekeke ngokupheleleyo kumntwana ngamnye, ngokuqhelekileyo kucetyiswa ukuba iminyaka eyi-12 ukuya kwe-14 ubudala ineminyaka elifanelekileyo ukuqala umdlalo wepalball. Uninzi lwabantwana abaneminyaka engama-50 ubudala bayakwazi ukuqonda nokugcina imithetho yezokhuseleko ngelixa bebanandipha umdlalo kwaye bengagxininisi ukuba batshaywe . Ngaphezu kwalokhu, ukuqonda komzali kuyafuneka ukuba izizathu zesikhokelo, ngoko iintsapho kufuneka zilungele ukutyikitya amaxwebhu kubantwana babo abangaphantsi kweminyaka eyi-18 ubudala.
Iingcebiso zePaintball zabaqalayo
Kubalulekile ukuba ungayesabi intlungu yepalball ngoba ibuhlungu ngaphantsi kweninzi labantu elindele. Nangona kunokwenzeka ukuba kukhwelwe kancinci okanye mhlawumbi ukushiye isicuphuko esincinci, liyingxenye yomdlalo. Ngokuqhelekileyo, abadlali bebhola yepalati badlula ngokuvakalelwa ngokukhawuleza baze bafumane yonke into ebonakalayo yepalball ukuba ibe yinto enomdla. Ngaphandle koko, ukufihla ngexesha lokudlala imidlalo embalwa akuyona indlela yokuphakamisa izinga lakho lobuchule.
Ungathathi imaski yakho. Umdlalo wakho unokuba lula kwaye ungonwabi ukuba ubuso bakho bukhuselekile ngokufanelekileyo. Ukulimala okukhulu kungenzeka ukuba lo mthetho awulandelwa, kwaye indawo ezininzi ziya kukukhawulela ngaphandle komdlalo ukuba ungakuvinjiswanga ngokupheleleyo ngenxa yokungayilandelanga imithetho.
Umlilo umpu wakho wepalati xa ubona umchasi kwaye uyathemba ukuba uphendule ukuba ubathethe. Lindela iipalaphu zokupenda ukuze zifike ngendlela yakho, njengoko isandi nesikhokelo sakho sompu wepalball singavumela abanye abachasiyo ukuba baziphi.
Xa kuziwa kwibhola yepende, ukhuseleko lubalulekile kubo bonke abachaphazelekayo kumdlalo. Ngaphandle kokugqoka imaski yakho yokukhusela, kubalulekile ukuba ungalokothi ususe izigulane xa uphuma kwintsimi, nangona ungasemdlalweni. Izigqoko zakho, i-mask kunye nezinye iigesi kufuneka zenziwe ngokukhethekileyo kwipalati okanye zivunyiwe ukuqinisekisa ukuba ziya kukukhusela ngokufanelekileyo.
Yintoni onokuyilindela xa udlala i-Paintball ngexesha lokuqala
IAllen University Admissions
I-Best Best ye-Oscar Pop Pop Songs
Piano Pieces ukuzama
Iikhompyutheni zeToyota Camry Inkqubo